bhimphoto: Hulas Motors formally ceases production
BIRATNAGAR, JAN 12 - Hulas Motors, the manufacturer of Sherpa, Mustang V2 and Mustang Max automobiles, announced Sunday that it was formally ceasing production. The company had stopped making these vehicles around three months ago.
हुलासको मुस्ताङ बन्द भयो
मुलुकको एकमात्र गाडी उत्पादक कम्पनी हुलास मोर्टसले औपचारिकरूपमा आफ्नो उत्पादन बन्द भएको घोषणा गरेको छ । तीन महिनायता गाडीको प्रोडक्सन युनिट बन्द गरेको कारखानाले आइतवार यसको औपचारिक घोषणा गरेको हो । २७ पुसमा विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुलास मोटर्सले सरकारले आफूहरूलाई यूरो थ्रीमा जानका लागि एक बर्ष समय नपथेका कारण उत्पादन बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ ।
प्रबन्ध संचालक सुरेन्द्र गोल्छाका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष२०७१ साउन १ देखि यूरो थ्रीका गाडी उत्पादन गर्न दुइ वर्षघि समय सीमा दिएको थियो । तर, आफूहरूलाई तीनदेखि चार वर्षसमय दिन आग्रह गरेको उनले बताए । 'एक बर्षमात्र थपिदिएको भएपनि हामी उत्पादन गर्न सक्थ्यौं तर, सुनुवाइ भएन । त्यसैले बन्द गर्नुको विकल्प रहेन,' उनले भने, 'दुःख साथ भन्नुपर्छ एउटा इतिहासको पाना पल्टाउन बाध्य भयौं ।'
१७ बर्षअघिबाट गाडीहरू उत्पादन गर्न थालेको हुलास मोर्टसको उत्पादन मुस्ताङ म्याक्समा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीहुँदा चढेपछि चर्चामा आएको थियो । शेर्पा नामको गाडीवाट उत्पादन सुरु गरेको हुलासले मुस्ताङ भीटू र मुस्ताङ म्याक्स ब्राण्डका गाडी बजारमा ल्याएको थियो । अहिलेसम्म करीव १ हजार ४ सय गाडी विक्री भएको उनले बताए । डिजलमा चल्ने यी गाडीहरू व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भन्दा पनि व्यवसायिक प्रयोजनमा वढि विक्री भएका छन् । पाल्पा, मुस्ताङ, बाग्लुङ, सुर्खेत, दाङ, उदयपुरलगायतका जिल्लाहरुमा वढि मात्रमा सञ्चालनमा रहेको गोल्छाले बताए । उनले भने 'गाडीको उत्पादन बन्द भएपनि मर्मत केन्द्र र पार्टपुर्जाहरू भने सहजरुपमा हामी उपलब्ध गराइरहन्छौ ।'
करीव ४ करोड लगानी पुगेको हुलास मोर्टसमा करीव २ सय मजदुर थिए । उत्पादन बन्द भएपछि १ सय मजदुरलाई विदा गरिएको छ । हुलासले उत्पादन गरेका गाडीको बजार मुल्य १६ लाख २५ हजारदेखि १८ लाख ५० हजारसम्म थिए । वार्षिक ७० देखि एक सयवटासम्म गाडी उत्पादन गर्दै आएको थियो । 'सरकारको ब्यवहारका कारण उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी ब्यवसायतिर ध्यान जान थाल्यो,' सञ्चालक गोल्छाले भने, 'अहिले आयातलाई प्राथमिकता दिएका छौ । तर, उत्पादनबाट पनि विमुख भने हुँदैनौं ।' भविष्यमा कार उत्पादनतर्फसोच रहेको उनले सुनाए ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो निजी सवारीसाधन बनाएको मुस्ताङ म्याक्सलाई कारखानाले तयार पारेर दिन रातारात काम गरेको थियो । गाडीको कारखाना गोल्छा दाजुभाइमध्येका सुरेन्द्रको आफ्नो रूचीको बलले चलेको हो । लामो समयदेखि अपेक्षित नाफामा जान नसक्दा पनि उनले कारखाना बन्द हुन दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी सवारी स्वदेशमै उत्पादित गाडीलाई बनाउने घोषणा गरेपछि उनीसहित कारखानामा जिम्मेवार प्राविधिकहरूको हौसला बढेको थियो ।
प्रमुख इञ्जिनियर प्रफुल्लचन्द्र दासले भने 'हामीले प्रधानमन्त्रीले चढने भएपछि सुविधालाई अधिकतम ध्यान दिएर नयाँ डिजाइनलाई निकै मेहनतले तयार पारेका थियौ ।' खासमा हुलासका गाडीहरू निजी सवारी नभइ 'प्यासेन्जर भेहिकल' का रूपमा उत्पादन गर्ने गरिएको थियो ।
भट्टराईका कारण कारखानालाई निजी सवारी बनाउँदा पुर्‍याउनुपर्ने सुविधाको मापदण्डमा निकै हतार परेको थियो । त्यसयता कारखानाले मुस्ताङ म्याक्सको सोही मोडेलका लागि निकैवटा बुकिङ पनि पाएको थियो । 'सरकारले गाडी उत्पादन गर्दा यूरो थ्रीको मापदण्डअनुसारको हुनैपर्ने भन्यो । हामीले त्योअनुसारका तयारी पनि गरेका हौ', उनले बताए, 'तर, हामीले ल्याएको इञ्जिन हुनुपर्नेजस्तो परेन । पहिलो टेष्टमै अघि बढ्न नसक्ने भयो । खासमा हामीलाई निर्माण र टेष्टका लागि समय नै पुगेन ।' उनका अनुसार पछिल्लो डिजाइन टाटाको सुमोजस्तो गरिएको थियो ।
त्यसका लागि चीनबाट झिकाइएको इञ्जिनले पहाडी क्षेत्रमा तान्न नसकेको परीक्षणमा देखियो । र्'अर्डरको चार महिनामा मात्रै इञ्जिन आइपुग्ने । अरु पाटपूर्जा तयारीमा समय लाग्ने भएपछि हामीले यूरो थ्रीको मापदण्डमा खुट्टा राख्न समय नै कम्ती भयो', उनले भने, 'समय दिइएको भए हामी परीक्षण गरेर एउटा बलियो गाडी बजारमा ल्याउने सोचमा काम गर्दै थियौं ।'
एकमात्र कारखाना भएकाले उद्योग र यातायात दुवै मंत्रालयका झन्झटिला प्रक्रियाले काम गर्ने हौसला घटाएको थियो । चीन र भारतबाट पाटपुर्जा आयात गरेपनि चाहिनेमध्ये चेसिजलगायत ३५ प्रतिशत सामान आफै उत्पादन गर्दै आएको इञ्जिनियर दासको दावी छ । 'धेरैवटा एकैखाले कारखानाहुँदा सरकारी नीति र हेराइमा हुने दृष्टि एकमात्र उद्योगका लागि सम्भव नहुने रहेछ', उनले भने, 'बाबुरामजीले चढ्नु भएर हाम्रो गाडीले जसरी चर्चा पायो सोहीअनुसार सरकारी नीति यो उद्योग बाँच्नु पर्छ । बचाउँ भन्नेमा गइदिएन ।' उनका अनुसार सरकारले दिएको दुइ वर्षको समय गाडी फिटिङ गरि ट्रायल पासको मापदण्डसम्म पुर्‍याउन पर्याप्त भएन । 'हामीले थप समय माग्यौं । जवाफ नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्नुको विकल्प रहेन', उनले भने, 'हामीले बेचेका गाडीलाई टुहुरो छाड्दैनौ । चाहिने सेवा दिन्छौ । तर, दुःखसाथ भन्न परेको छ अब नया“ मुस्ताङ उत्पादन हुँदैन ।'
सरकारको व्यवहार यहाँ अटोमोबाइलमा आधारीत कारखाना खोलेर उत्पादन बजारमा लैजानुभन्दा आयात गरेर बेच्ने कामलाई प्राथमिकता दिने रहेको उनले बताए । उनले भने 'त्यसैले हामीकहाँ सडकभरि विदेशी गाडी छन् । शोरूम खुलेको खुलेकै छन् ।'
विकल्प विद्युतीय रिक्शा
विराटनगर-१७ स्थित हुलास मोर्टसको कारखानामा अहिले विद्युतीय रिक्शा बनाउने काम भइरहेको छ । आफैले उत्पादन गर्ने काम बन्द गरेपनि कारखानाले आयातीत सामानको विक्रीलाई अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ । सामान सबै आयात गरेर यहाँ फिटिङ गरि बजार पठाउने काम थालिएको छ । सामान र यात्रु बोक्ने दुइ प्रकारका रिक्शा बनाएर बजारमा पठाउन थालिएको इञ्जिनियर दासले बताए । हलुका सवारी, रिचार्जेबल ब्याट्री र दाम पनि कम भएकाले बजारमा अहिले हुलास विद्युत नामबाट ल्याइएका रिक्शाले अरू यस्तै उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा थालेको छ ।
'हामीले एउटा प्रोडक्सन बन्द गरेर अर्को थालेका हौ', उनले भने, 'अब पहिले जति कामदार र लागत पनि पर्दैन ।' लागतमा जोखिम कम पर्ने भएकाले उद्योगले रिक्शामा हात हालेको उनले बताए । गाडी उत्पादनका लागि बसाइएको कारखानाको पूर्वाधारले इलेक्टि्रक रिक्शाका लागि सजिलो पनि भएको छ । यसका लागि ९० प्रतिशत सामान आयातीत छन् । यहा“ फिटिङ गरेर बजार पठाउन सुरू गरिएको छ ।
-भीम घिमिरे/लीलावल्लभ घिमिरे
(२०७१ पुस २८ मा कान्तिपुर र काठमाण्डु पोष्टमा प्रकाशित यी समाचार आर्काइभका लागि ब्लगमा पनि राखेको हुँ । -भीम )
योसँग सम्बन्धित पुराना खबर पढ्न मन लागे तलका शिर्षकमा क्लिक गरौं ।